Warbixin hor dhaca ah oo laga soo saaray dilkii Xildhibaan Yuusuf Dirir. |
Warbixin hor dhaca ah oo laga soo saaray dilkii Xildhibaan Yuusuf Dirir.
Guddigii Xukuumadda Somaliya ay u xil saartay baadhitaanka dilka Xildhibaan Yuusuf Dirir, ayaa soo saaray warbixin hordhac ah,xili shalay oo Jimco aheyd, balanta ay aheyd inay soo bandhigaan Warbixin hordhac ah oo la xidhiidhta cida dilka geysatay iyo sababta dilka ka dambeysay.
Guddigan ayaa waxaa hogaaminaayay Xeer ilaaliyaha guud ee Somaliya Axmed Cali Daahir, waxana uu sheegay in baadhis ay sameeyeen kadib ay heleen macluumaad ku saabsan cidii ka dambeysay dilka Xildhibaanka.
Xeer ilaaliyaha oo shir jaraa’id qabtay, ayaa sheegay inay gacanta ku hayaan Guddigooda qoryo gaadhaya 7- qori lix ka mid ah ay yihiin Ak47 halka qoriga kalena uu yahay Daba jeex/BKM.
Wuxu sheegay in kiiskan ay u xidhan yihiin 14-ruux oo ku xidhan xarunat CID ee Magaalada Muqdisho, baadhitaano dheeri ahna ay ku socdaan, maadaama Guddiga laga doonaayo inay keenaan Warbixino rasmi ah, halka warbixinta Guddiga ay soo gudbiyeen ay aheyd mid hor dhac ah.
Saddexd baabuur ayaa sidoo kale gacanta lagu haayaa waxa ayna kala yihiin Baabuurkii uu watay Xildhibaanka la dilay, Baabuur ay leedahay Laanta socdaalka ee Dowladda iyo gaarigii ay wateen ciidamada Milateriga ee falka dilka ah geystay.
14-ka ruux ee falkaan u xidhan, labo ka mid ah waa ciidamada Milateriga iyaga oo dhaawac ah ayeey xidhan yihiin, halka inta kalena ay yihiin dad la tuhmay inay falkaan ku lug lahaayeen, hayeeshe baaritaano dheeri ah ay ku socdaan.
Xukuumada ayaa sheegtay maalin kadib dilka markii uu dhacay in ciidamo Milateri ah oo wadada maraayay ay ka dambeeyeen dilka Xildhibaanka, kadib markii ay rasaas ku fureen baabuurkiisa.